बजारबाट हराइसकेका यी नेपाली नोटहरु ! — Nepal Sarokar
Posted on October 17, 2016 by Nepal Sarokar
नेपाल सरोकार संवाददाता
काठमाडौं । अहिले नेपाली रुपैयाँका विभिन्न दरका नोटहरु प्रचलनमा रहेका छन् । खासगरि अहिले रु ५ देखि १००० सम्मका नोटहरु चल्तीमा छन् । जस अनुसार रु ५,रु १०, रु २०, रु ५०, रु १००, रु ५०० र रु १००० हजारका नोटहरु मात्र अहिले बजारमा पाइन्छन् ।
नेपाली नोटहरुमा पनि बेला बेलामा निकै परिवर्तनहरु भएका छन् । पछिल्लो समय विभिन्न दरका नोटहरुमा राखिदै आएको जनावरका चित्रहरु फेरिएका छन् । तर यो एक दशकभित्रमा केही नेपाली नोटहरु भने हराएर गएका छन् ।
विभिन्न कारणले राष्ट्र बैंकले निष्कासन बन्द गरिदिदा ती नोटहरु अहिले बजारमा प्रचलनमा छैनन् । ती नोटहरु अब सम्झना र संकलनकर्ताहरुसँग मात्र सीमित रहन पुगेका छन् । हेरौं ती नोटहरु कुन कुन हुन् ?
रु २५० को नोट :
रु ५० को विशेष नोट :
रु २५ को नोट :
रु १० को प्लाष्टिक नोट :
रु दुईको नोट :
रु एकको नोट :
Posted in फिचर-स्टोरी, फोटो ग्यालरी | Leaveareply